> Resource > Lugood > Wareejinta aan iibsaday Gadan Faylal ay ka iPod in Lugood
Waxaan doonayaa in aan wareejiyo aan music ka iPod in Lugood aan. Ma heli sababta tufaax dhigo mid si dhib badan !!!! Walaashay heesaha oo dhan ku saabsan Lugood iyada oo wuxuu illoobay in sirta ah iyo ma heli karaa email anigu saas ma aan awood u karo computer! Qof kasta waa ogyahay hab fudud ayaan si fudud ku wareejin karaa music guud (aan downloads.) Thanks.
Halmaamay in gurmad maktabadda Lugood ka hor reinstalling kombiyuutarka? Waayaya maktabadda Lugood aad sabab u ah shilalka computer ama formatting shil? Ama, sida user ee kor ku xusan, waxaad kaliya illoobin aqoonsiga Apple iyo password, taas oo ka dhigaysa in aad ku guul darreysato inay ku wareejin files u iibsaday inay Lugood? Nasiib wanaag, aad ku kaydsan dhammaan xogta ku saabsan iPod. Xaaladahan, laga yaabaa inaad doonayso inaad bedelato files si Lugood hadda. Tani waxay halkan article ka socda si uu idiin tuso laba hab oo ku saabsan sida gadashada iyo gadashada files aan ahayn si ay u gudbiyaan ka iPod in Lugood. Hadda, akhri korkooda saaran.
Habka 1. Copy iibsadaan iyo kuwa aan iibsaday ka iPod in Lugood (Ma u baahan tahay inaad bixiso)
1) Sidee si ay u gudbiyaan music iPod in Lugood
2) Sidee inuu u dhaqaaqo filimada ka iPod in Lugood
3) Sida loo nuqul ka playlists ka iPod in Lugood
4) Lugood Transfer U, podcasts, videos music, TV muujinaya & audiobook
Habka 2. Transfer iibsadaan ka iPod in Lugood (Dhulku free)
Habka 1. iibsadaan Copy iyo kuwa aan iibsaday ka iPod in Lugood (Ma u baahan tahay inaad bixiso)
Faa'iido: Saxiixa iibsadaan oo dhan ama soo xulay oo aan ahayn iibsadaan. Qasaarooyinka: Ma lacag la'aan ah.
Si aad u wareejin iibsadaan oo aan sidoo kale files iibsaday ka iPod in Lugood, ee TunesGo Wondershare ama TunesGo Wondershare (Mac) shaki la'aan waa doorasho wanaagsan. Waa la isku halayn karo oo lagu aamini karo software iPod in Lugood kala iibsiga, kuu koobi xulay ama dhammaan music, filimada, Lugood U, podcasts, music video, audiobook iyo TV muujinaysaa ka iPod in Lugood qasabno yar gudahood.
Diyaarinta: Hubi in aad soo bixi oo lagu rakibay version saxda ah ee suuqa kala iibsiga software ah iPod in Lugood kombiyuutarka. Halkan, waxaan isku dayi version Windows ah si ay u gudbiyaan files ka iPod in Lugood. Users Mac qaadi karaan tallaabooyinka ka mid ah.
Tallaabada 1. Isku aad iPod in kombiyuutarka via cable USB
Isticmaal ah USB cable Apple in ay ku xidhmaan aad iPod in kombiyuutarka. Tani software iPod in Lugood kala iibsiga lagu ogaan doono iyo tusto iPod iyo waxyaabaha ay u furmo suuqa hoose.
Fiiro gaar ah: The version Windows si fiican u la shaqeysaa iPod xiriiri 3/4/5 la macruufka 5, 6, 7, 8 iyo 9, iPod nano 1/2/3/4/5/6/7, iPod classic 3/2/1 , iyo iPod isku shaandheyn ku 1/2/3/4. Sida version Mac ah, waxa ay si buuxda u la jaan qaada iPod xiriiri 5/4 socda macruufka 9,8,7, 6 iyo 5. Ka sokow, version Mac ah wuxuu kuu ogolaanayaa inaad si ay u gudbiyaan music iyo playlists ka nano iPod / shaandheeyn / classic in Lugood.
Tallaabada 2. files Nuqul ka iPod in Lugood
Tag Media khaanadda tagay. Waxaad ka heli qaybaha warbaahinta kala duwan on line ugu sareeya. Dooro mid ka mid category oo guji si ay u muujiyaan in ay suuqa kala.
1. Transfer music ka iPod in Lugood
Riix Music on line ugu sareeya inay soo galaan suuqa kala maamulka music ah.
Riix Smart dhoofinta in Lugood . Software Tani waxay ogaan doonaan heesaha oo dhan iyo shaandhayso song jira in Lugood iyo nuqul kuwa Lugood ma aha inay Lugood kaliya.
Hubi heeso aad rabto in lagu wareejiyo si Lugood ama doortaan oo dhan, ka dibna riix saddexagalka hoos dhoofinta in > dhoofinta in Lugood Library . Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan wareejinta music iPod in Lugood >>
2. dhaqaaq Movies ka iPod in Lugood
Tag ka Movies tab on line ugu sareeya. Dooro filimada aad rabto in aad u guurto Lugood. Markaas, guuraan filimada iPod in Lugood eegista. More info >>
3. playlists Nuqul ka iPod in Lugood
Maxay ku saabsan playlists kala iibsiga ka iPod in Lugood? Tiirka tagay, guji playlist . On xaq, dooran playlists aad doonayso iyo u dhoofin in Lugood. Faahfaahsan oo ku saabsan info iPod playlist inay kala iibsiga Lugood .
4. podcasts Switch, Lugood U, audiobook, videos music iyo bandhigyada TV
Si aad u beddelaan, kuwaas oo files warbaahinta, kaliya aad u baahan tahay inaad guji files warbaahinta on line ugu sareeya mid mid. Markaas, furmo u dhiganta, sax ah files warbaahinta iyo u dhoofin in Lugood.
Faa'iido: Dhulku lacag la'aan ah. Bedelka dhammaan faylasha iibsaday. Qasaarooyinka: ku guuldareysato inay u guuraan files oo aan ku iibsaday. Ma u baahan tahay ID Apple. Ma habboon tahay awood u kombiyuutarka.
Raac tallaabo-tallaabo-tutorial hoos ku qoran:
Tallaabada 1. Run Lugood kombiyuutarka.
Tallaabada 2. Click Store iyo menu hoos-hoos, guji fasaxayaa Tani Computer ...
Tallaabada 3. Marka wada hadal ah oo ka soo baxaba, talooyin aqoonsiga Apple iyo password in aad isticmaasho si ay u iibsadaan files ka Lugood. Haddii aad u isticmaashay IDs badan Apple si aad u iibsato faylasha, waa in aad awood u computer ee dhammaan IDs Apple.
Tallaabada 4. Isku aad iPod in computer
Tallaabada 5. Under AALADAHA , xaq riix ama guji xakameeyo aad iPod. In ay liiska hoos-hoos, guji Iibsasho Transfer .
Fiiro gaar ah: computer A ogolaa karo ugu badnaan shan IDs Apple.
Sidee si ay u xaliyaan marka iPod ma hagaagsan doonaa files leh Lugood?
Sidee inuu ka soo kabsado maktabadda Lugood